Imihlaba yeMidlalo ye-YouTube namhlanje eSpain | Iindaba zeGajethi
Imihlaba yeMidlalo ye-YouTube namhlanje eSpain
Sibona iindaba ezilungileyo kakhulu namhlanje kubasebenzisi abahlala eSpain. Ngoku iqonga likaGoogle kwimidlalo yevidiyo yeYouTube yeMidlalo eza eSpain ukuhlala. Uninzi lwenu luqinisekile ukuba sele nonwabile nalo ukusasazwa kwemidlalo ebukhoma evela kubasebenzisi beSpanish abazinikele kwimidlalo, Kodwa ngokuqinisekileyo abanye abaninzi bebengazazi ezi ndaba.
Kodwa sihamba ngenxalenye zabo bonke abo bafumana yonke le nto kwakhona, ke ngokomgaqo uphawule loo nto I-YouTube yeMidlalo yeqonga liqonga elazalwa malunga nonyaka odlulileyo kwaye ikhethekile kwihlabathi labadlali bevidiyo kunye nabasebenzisi lokonwaba kwihlabathi lokusasaza iividiyo ezinamaprofayili enziwa ngokwezifiso ukufumana izaziso kunye nezaziso xa kukho nabaphi na abasebenzisi bakho abathandayo abasungulwa ngokusasaza kwaye okona kubaluleke kakhulu, le midlalo siyifunayo.
Izihloko ezinje ngeCall of Duty, Clash Royale okanye iPokémon, ziyinxalenye encinci yemidlalo esinokuyilandela kuleqonga litsha le-YouTube. Kuyo siza kubona zonke iindaba kunye neendaba ezilindelwe kakhulu ngabadlala umdlalo.
Nguwo Intengiso ekhutshwe nguGoogle Spain ukumilisela le nkonzo:
Siyakhulula #YouTubeGaming ngomdyarho oshukumayo! @ Rubiu5 @vegetta777 o @WillyrexYT bakulindile # YTGaming24h ? https://t.co/z8iOzsBCm1 pic.twitter.com/rsC1u2DZ2o
-Google Spain (@GoogleES) NgoNovemba 30 ukusuka kwi2016
Kwimeko apho sinemibuzo ngayo, sinako jonga yonke imixholo ekwi-PC, kwithebhulethi nakwisixhobo esiphathwayo. Ukwahlula umxholo wemidlalo kwindawo enye kunomdla kubo bonke abo babone ukumiliselwa kweli qonga eMelika okanye eUnited Kingdom kwaye basala benomnqweno wokuba nayo eSpain. Ngoku iyafumaneka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Imihlaba yeMidlalo ye-YouTube namhlanje eSpain
Inkampani yaseSpain i-SPC iveza "iSmart Generation", ukuzibophelela kwayo kwiipilisi kunye nokunxitywa